Xarkaha curcurka ee ugu wanaagsan 2018 | Ragga Stylish
Jijimooyinka waxqabadka ugu fiican
Waa wax iska caadi ah haddii aad bilowdid inaad ciyaartid isboorti ama aad dejisid ujeedo cad sida inaad qaab yeelatid ama aad miisaanka iska rido, waxaad dooneysaa inaad wax badan ka ogaato waxqabadka aad sameyso. Maanta waxaa jira jijimado gabi ahaanba falanqeynaya howlaheena isboorti ee kalooriyeyaasha aan isticmaalno, mitirrada aan safreyno iyo xitaa garaaca wadnaha ee aan lahaan jirnay daqiiqad kasta oo safarka ka mid ah. Si kastaba ha noqotee, way adag tahay in la kala doorto samaynta iyo moodellada badan. Qoraalkan waxaan kuugu soo bandhigi doonnaa jijimooyinka ugu fiican ee 2018 ee la xiriira tayada / qiimaha iyo shaqadooda.
Ma rabtaa inaad ogaato waxa ay yihiin jijimooyinka waxqabadka ugu fiican? Akhri si aad u ogaatid iyaga.
1 Samsung Gear Fit 2 Pro
2 Polar M430 Jijin
3 Jijimmo caqli leh: Xiaomi Mi Band 3
Qaabka jijimadan ayaa gebi ahaanba kacaan ah maadaama ay tahay iibinta ugu wanaagsan ee nooca Samsung. Waana inay buuxiso inta badan filashooyinka iyo baahiyaha macaamiisha sheegatay qaabkii hore. Horumarintu shaki la’aan aad ayey u wanaagsan yihiin. Midda ugu kacdoonsan marka loo eego qaabkeedii hore waa shaashadda midabka qalooca. Waxay leedahay shaashad taabasho tayo leh oo cabirkeedu yahay 1,5 inji. Waxay ku habboon tahay kuwa dabbaasha, maxaa yeelay waxay u adkeysanayaan biyaha waana la hoos gelin karaa. Halkan waad ka iibsan kartaa.
Taabashadu si fiican ayey u jawaabtaa xitaa haddii gacmuhu ka dhididaan jimicsi culus ama ay qoyan yihiin biyo. Muraayadda shaashadda waa nooca Gorilla Glass 3 oo leh astaamo aan ka sii xumaanaynin xagashada ama isqabqabsiga.
Hawlaha ugu muhiimsan ee jijimadu leedahay waxaan kaheleynaa:
Waxa caadiga ah ee dhammaan noocyada jijimadan marka laga hadlayo la socoshada dhaqdhaqaaqa. Taasi waa, tirinta tilaabada, masaafada la soo safray, kalooriyada la bixiyay, raadinta hurdada, iwm. Tan waxaa sameeya jijimooyinka oo dhan, sidaa darteed hadda wixii ka dambeeya ma magacaabi doonno.
Raac qaar ka mid ah isboortiga gaar ahaan qaab jimicsi jireed si aad u xakameyso.
Tirinta dabaqyada oo la kiciyey. Tani way kufiican tahay qofkasta oo jecel jaranjarooyinka fuulista.
Tan waxaa lagu gaadhay mahadsanidiin hawsheeda GPS. Xaqiijinta ayaa si weyn loo kordhiyay.
Kormeerka garaaca wadnaha waa sax.
Muusikada aad ka dhagaysanaysid waad ka maamuli kartaa jijisada oo xitaa waad beddeli kartaa oo kaydin kartaa si aad uga dhagaysato dhegahaaga dhegaha leh ee Bluetooth
Kaliya kuma xirmi karto adoo adeegsanaya Bluetooth, waxay kaloo leedahay wifi. Sidan oo kale, waad ku firfircoonaan kartaa xitaa haddii aadan haysan mobilkaaga.
Polar M430 Jijin
Jijimadani waxay ku habboon tahay dhammaan taageerayaasha socda. Waa saacad leh kormeeraha garaaca wadnaha oo falanqeeya dhammaan howlaha aad qabato. Way fiicantahay haddii aad rabto wax fudud oo aad kaliya tahay mid ka mid ah kuwa u baxa orodka oo doonaya inay wax xakameeyaan. Waa muhiim in la ogaado haddii waxqabadkaagu fiicnaaday Polar M430 ayaa kaa caawin doona inaad sidaas sameyso.
Saacaddani waxay u taagan tahay GPS-keeda iyo barnaamijkeeda kaa caawinaya inaad wax ka beddesho baahiyahaaga. Adeegsiga waxaa loogu talagalay dhammaan dadka sida dhabta ah u qaadanaya tababarkooda ama ku tartamaya orodyahannada. Sidaa darteed, waxay leedahay tallaabooyin aad u gaar ah.
Ahaanshaha saacad shaashaddeeda ayaa ka weyn tan jijin waxqabad. Shaashadan waxaad ku eegi kartaa dhammaan xogta la helay inta aan wadno ama ku soconno baaskiil. Qaarkood way xoogaa ka weynaanayaan sida caadiga ah waana wax xoogaa weyn haddii aan leenahay curcurka cidhiidhi ah. Shaashadu waxay leedahay qaraar wanaagsan waxayna ka madax banaan tahay xaaladaha iftiinka waqtigaas. Ma aha mid la taaban karo, laakiin waxay leedahay badhanno ka dhigaya mid aad ugu habboon in la isticmaalo oo markaa shaashaddu waa ka madhan tahay nabarro. Waxaa jira qalab kala duwan sida suumanka iyo shaashadaha shaashadda waa la iibinayaasi loo ilaaliyo oo loo sii dheereeyo.
Haddii aad rabto xog qiyaaseed oo sax ah, waa inaad dhaqaajisaa bluetooh oo aad gashaa waxqabadka aad rabto inaad sameyso. Cabbiraaduhu waxay noqon doonaan kuwo sax ah. Nidaamyada shaqo ee la heli karo waxaa ka mid ah 3:
Sax ugu badnaan Xaaladdan oo kale, waxay u adeegtaa in si sax ah loo cabbiro xogta markaad socoto. Waa doqonimo in qaabkani firfircoon yahay haddii aadan sameynayn maadaama uu isticmaali doono batari aad u badan. Shaqada noocan ah baytarigu wuxuu diyaar u yahay inuu socdo 8 saacadood.
Sax sax ah Waxaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo nashaadaadka iftiinka sida socodka buuraha oo aad rabto inaad ogaato isticmaalka kaloorigaaga, masaafada safarka, iwm.
Xaqiijinta keydka. Waa nidaamka ka dhiga batteriga inuu sii dheeraado.
Jijimmo caqli leh: Xiaomi Mi Band 3
Kani waa moodalkii kacaanka ee Xiaomi, kadib noocii hore ee ahaa jijintii waxqabad ee ugu iibinta badnaa taariikhda. Si ka duwan labada moodel ee kale, waxay leedahay naqshad yar oo caqli-gal ah si ay cabbirkaaga si sax ah u sameyso Waxay ku siin kartaa adeegyada qaar ka mid ah jijimooyinka ka qaalisan 100 euro, laakiin leh qiime saddex jeer ka yar.
Tus nooc kasta oo ogeysiin ah shaashadda taabashadaada. Kuu ogolaanayaa inaad la falgalaan fariimaha aad heshay. Shaashadda waxaa ku yaal badhanka taabashada yar si loo fududeeyo isticmaalka shaashadda. Suunka waa mid aad u raaxo badan oo ma ogaan doontid inaad xiraneyso. Waxaa jira midabbo badan oo lagu kasbado, in kasta oo kan aasaasiga ahi madow yahay.
Shaqooyinkeeda iyo astaamaheeda waxaa ka mid ah:
Cabir dhammaan howlaha maalinlaha ah ee aad qabato. Waxay tirisaa talaabooyinka, masaafada safartay, kalooriyada la cunay, iwm.
Qiyaasta hurdada waa sax.
Shaashadda waxay ku tusaysaa noocyada ogeysiisyada iyo farriimaha gaadha mobilkaaga.
Hesho wicitaanada. Xitaa haddii aadan la hadli karin jijintan, waad wici kartaa wicitaan ama waad ka jawaabi kartaa jijisada. Waxay ku habboon tahay markaad mobilada aamusnaato oo weli jijimadu kugu wargeliso wicitaankaaga.
Qiyaasta garaaca wadnaha ayaa si sax ah u cabbiraysa inkastoo xaqiiqda ah in jijintu aad u hooseyso. Waa sax la barbar dhigi karo kan kale ee saacadaha isboortiga.
Macluumaadka ku saabsan cimilada. Shaqadani waa mid kacaan ah oo la xiriirta tii hore. Waxaad awoodi doontaa inaad ogaato heerkulka iyo waqtiga wakhti kasta.
Waxaan rajeynayaa in xulashadan aad kala dooran karto inta ugu sarreysa jijimooyinka waxqabadka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Jijimooyinka waxqabadka ugu fiican
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato muruqyada muruqyada
Sida loo sameeyo taabasho